CYTOKININ UDUBKA FOR ORCHIDS: SAWIR KA MID AH DAROOGADA HOORMOONKA, TILMAAMAHA ISTICMAALKA BADEECADA, SHARAXAYA WAXA LOO BAAHAN YAHAY IYO SIDA LOO ISTICMAALO SI SAX AH - SOOSAARKA DALAGGA
Cytokinin Paste - caawiye lagu kalsoonaan karo ee orchids! Talooyin dalbasho
Kobcin kasta oo xiiso leh oo xiiseynaya arrinta ku saabsan dhalashada orchids.
Waxaa jira walxo hormoon oo gaar ah oo dardar-gelinaya abuurista caleemo cusub oo ah qaabka ubax ee ubax.
Cytokinin Paste - qalab aan muhiim ahayn iyo kiciyeyaasha la awoodi karo ee samaynta hababka cusub iyo ubaxa.
Cytokinin paste waa daawo ku salaysan phytohormone cytokinin kaas oo kor u qaada kicinta qaybta unugyada.. Marka hore, daroogada galbeedka waxaa loo yiqiin Keikigrow, oo laga tarjumay Hawaiian micnaheedu waa "ilmaha, ilmaha". Makhaayaddu waxay leedahay analogs ka mid ah cawska asalka ah ee laga soo dhoofiyo, oo ku jira hoormoon lanolin waana qiimo jaban qiimaha. Waxaa sidoo kale jira daawooyin leh qaybo dheeraad ah - fitamiinnada.
Digniin! Markaad isticmaasho cytokinin paste, waxaa lagama maarmaan ah in la tixgeliyo in ay ka mid tahay fasalka walxaha halista ah, sidaa daraadeed waa in laga ilaaliyaa carruurta iyo xayawaanka, gacmo gashana waa in la isticmaalo marka la shaqeynayo diyaarinta.
Boggayaga waxaad ka heli kartaa macluumaad ku saabsan daaweynta orchid kale:
Fitoverm - si loola dagaallamo dariiqyada, aphids iyo cayayaanka kale;
Aktara - si loola dagaallamo dirxiga cayayaanka;
Zircon - kobcinta iyo ubaxyada;
Phytosporin si loo xakameeyo macmacaanka macaan, kalluunka xidid, Fusarium iyo bakteeriyada;
Epin - muddo dheer ubax iyo ka hortagga fangas iyo cudurada bakteeriyada.
Cuntada Cytokinin waxaa loo isticmaalaa in lagu dhiriyo dhirta dabayaaqada jiilaalka hore. Waa waqtigan in ubaxyada ka soo tooseen hurdo, iyo phyto-mix waxay kicisaa geeddi-socodka ee orchids. Dalbo daroogadu waxay noqon kartaa, haddii ubaxyada gudaha ay ku jiraan hibbaar dheer oo aaney degdeg u kicin.
Haddii dhirta ay ku jiraan xaalad sabool ah ama xaalad halis ah, caleemuhuna waxay ku koraan hal jihada, ka dibna caleemaha ayaa si guul leh u xalliya dhibaatooyinkaas.
Waxaa lagu talinayaa in la daboolo goynta kaliya marka hababka kale ee dib-u-dhaqaajinta aysan waxtar lahayn.tani waa fursada ugu dambaysa ee lagu badbaadinayo orchid.
Ubaxleyadu kuguma talinayaan isticmaalka qalabka haddii uu dhirta leeyahay waxyeelo dibadeed ama cudur. Phytopreparation waxay leedahay xaddidaad kale oo la isticmaalo:
Laan ka mid ah ubax waxaa waxyeeleeyay cayayaanka ama cudurada. Haddii aad isticmaasho boomaatada, qaybaheeda waxay dardar galinaysaa geerida dhirta iyada oo aan fursad loo helin inay ku koraan sprouts caafimaad oo ku saabsan maaddada laga helo.
Kala shaqeynta in ka badan 3 kuulo laan kasta, sidaa daraadeed waa cunto aan ku filneyn caleemaha cusub.
Waa wax aan macquul aheyn in daroogada ay ku dhacdo caleemaha iyo xididdada, waxaad u baahan tahay oo kaliya inaad koofiyadaha ku xakameyso.
Waxyaabaha ay ka kooban tahay wakiilka hoormoonka
Cytokinin waxay u dhaqantaa sidii qayb firfircoon. Waa hoormoon waxayna kicineysaa qaybta unugyada. Halabuurka waxaa sidoo kale ku jira fiitamiin iyo lanolin.
Muxuu geedka u baahan yahay cadarkan?
Cytokinin paste waxaa loogu talagalay in lagu dedejiyo habka qaybta unugyada., waxay xakameysaa hababka dheef-shiid kiimikaad, maaddaama ay adeegsanku kicineyso kobcinta acids amino. Dhab ahaan codsigii ugu horeeyay, natiijada soo socota ayaa la gaarey:
koritaanka hurdiga ama ubax budada ah ayaa soo kiciya, oo dhawaan la baadho, ubaxu wuxuu noqonayaa mid dheer;
jiritaanka caleemaha da'da iyo dhimashada ayaa la kordhinayaa;
thanks to cytokinin, koritaanka caleemaha ugu weyn ayaa la xakameynayaa, halka caleemaha lateral si firfircoon u horumariyaan;
ubaxu wuxuu noqdaa mid dabacsan;
geedi socodka gabowga ayaa hoos u dhacaya oo iska caabiya cudurada.
Badbaadada kahor isticmaalka
Ka hor inta aadan codsan bacriminta cytokinin, waxaad u baahan tahay inaad barato sharciyada soo socda markaad la shaqeyneyso:
Orchids waa in aan la daaweynin haddii ay jiraan waxyeello gaara ama ubax ku dhuftay cudur.
Dalbashada cadarka ayaa lagu talinayaa oo kaliya geedaha qaangaarka ah, maadaama ay dhaawici karto dhallinyarada.
In formation of 2 caleemaha ka mid ah buro, waxaa lagama maarmaan ah in la joojiyo isticmaalka daroogada hormoon, iyo ka saar mid ka mid ah caleemaha.
Markaad isticmaashid caleenta waxaad u baahan tahay inaad hubiso in aysan ku dhicin caleenta orchid.
Ha ku keydso dabka radiators.
Ka hor intaadan isticmaalin daroogada, waxaa lagula talinayaa in lagu hayo heerkulka qolka illaa 2 saacadood, ka dibna boomaatadu waxay noqon doontaa mid jilicsan oo diyaar u ah inay tagto.
Waxaad dalban kartaa mashiinka cirbadda ama cadayga, taas oo ah mid nadiif ah.
Ma daaweyn kartid nidaamka xididka leh cadar cad, haddii kale dhirku wuu dhiman karaa.
Dhammaan nidaamyada lagu shaqeynayo orchids waxay ku sameeyaan astaanta. Hubso in qalabku uusan ku dhicin maqaarka iyo indhaha indhaha, iyo shaqada ka dib, si fiican u dhaq gacmaha.
Ha isticmaalin boomaatada, taas oo dhacday.
Xaggee iyo inta aad ka iibsan kartid, iyo maxay u egtahay sida sawirka?
Moscow, waxaad ka iibsan kartaa daroogada dukaanka ee EffectBio, iyo in St. Petersburg - ee Angelok. Kharashka cadceedu waa 100 RUB. Waxaad iibsan kartaa qalabka adiga oo aan guriga ka tegin, iyada oo loo marayo dukaanka online-ka: effectbio.ru ama angelok.ru.
Sidee daroogada loo arki karaa sawirka.
Miyuu suurtogal yahay iyo sida loo sameeyo naftaada?
Waxaad diyaarin kartaa boomaatada cytokinin guriga. Sidaa darteed waxaad u baahan doontaa inaad iibsato qaybahan soo socda:
Nidaamka karinta waa sida soo socota.:
Qaado 1 g of benzyladenine oo ku milmi 20 ml 96% ethanol.
Ka dibna ku dar 100 g of lanolin, oo hore u dhalaalay biyaha qubeyska.
Ka tag masska keentay inuu qaboojiyo. Waqtigaan, miisaanka alkahoosha ayaa ka soo baxaya.
Baakada la diyaariyay waa in lagu keydiyaa qaboojiyaha.
Tilmaamaha tallaabo tallaabo ee isticmaalka
Aan u fiirsanno faahfaahin dheeraad ah sida loo isticmaalo wakiilka hoormoonka.
Si loo kobciyo kelyaha hurdiga ah, waxaad u baahan tahay inaad qaadato kubad yar oo jinka ah (dhexroor 2 mm). Qalabka noocan oo kale ah sida cadayga ama cirbadda ayaa ku habboon arjiga codsiga.
Nidaamka lagu daaweynayo orchid leh boomaatada cytokinin waa sida soo socota:
Fiiri miisaanka daboolka oo aad u fiiriso joogitaanka kelyaha nool ee hoos yimaada.
Isticmaal cadayga, ku dabool dhibicda cawska.
Si aad u hesho peduncle, cabirka darajada waa in uu ahaado 0.5-1 mm, loogu talagalay sameynta caleemo daaqsinka ah - 2 mm, laakiin kama badna qiyaasta 2.5 mm.
Si loo dedejiyo koritaanka iyo kordhinta branching, geedi socodka kelyaha, xoog u dhow dhamaadka biqil, iyo si loo dhaqaajiyo ubax - u dhow saldhigga.
Faafin mashiinka dusha sare ee kalyaha oo leh lakab khafiif ah.
Ku rid ubaxa qol leh iftiin ku filan iyo heerkul ah oo ku saabsan 22 darajo Celsius.
Goorma iyo waxa laga filayo natiijada?
Waxaad arki kartaa natiijooyinka ugu horreeya ka dib marka aad dalbato dhoobada maalinta 7-10.. Waxay ka kooban tahay kuwan soo socda:
marka la adeegsanayo isku dar ah 1.5 mm - caleemaha ubax cusub ayaa la sameeyay;
markaad codsaneyso 2-2,5 mm cad cad, geeddi-socod cusub ayaa la sameeyaa, taas oo waqti ka dib ay noqon doonto warshad gooni ah.
Dib u hagaajin
Natiijada ugu wanaagsan, waxaa wanaagsan in dib-u-socodka orchid ka dib 7 maalmood ka dib.
Laakiin beeralayda qaar ayaa ku qanacsan yihiin in daaweyntu ay tahay hal mar-aan ka badnayn 3 buro hal qalliin. Markaas caleemaha cusub waxay awoodi doonaan inay si buuxda u cunaan una firfircoonaadaan.
Marwalba beeralayda ubax ma isticmaalaan cytokinin jinka si sax ah. Khaladaadka ugu wayni waxay inta badan la xiriiraan codsi weyn oo daroogada ah. 2-3 maalmood ka dib waxaad arki kartaa caleemaha fool xun. Si aad u daaqa geedka, waxaa lagama maarmaan ah in laga saaro geeddi socodka daciifka, oo ka tago mid xoog leh.
Daryeelidda warshad ka hor iyo ka dib isticmaalka daroogada
Ka dib marka la daaweeyo cytokinin paste, daryeelka orchid waa sida soo socota:
Nalalka. Orchid wuxuu jecelyahay inuu koro oo horumariyo oo kaliya meel wanaagsan oo iftiin leh. Waxaa haboon in la dhigo daaqadaha bariiska ama dhinaca galbeed si markaa qorraxdu si toos ah u dhacdo.
Waraabinta. Ubax ka dib marka la maareynayo macmacaan waxay u baahan tahay waraabin joogto ah oo dhexdhexaad ah. Si aad u sameysid qoyaan sida ciidda u dillaaca, adoo isticmaalaya biyo kulul iyo diirran.
Dharka ugu sareeya. 2 asbuuc ka dib marka la kiciyo baastada, waxaad u baahan tahay inaad iibsato succinic acid, oo aad ka sameysan karto nafaqo iyo biyo 2 jeer bishii. Si aad u diyaariso xalka, qaado 2 kiniin, u rog budada oo ku shub 1 l oo biyo ah.
Khabiiradayadu waxay diyaariyeen alaab aad ku saabsan sida loo quudiyo orchid si ay carruurtu u muuqdaan, iyo sidoo kale inta lagu jiro ubax. Intaa waxaa dheer, waxaan ku siin doonaa macluumaad ku saabsan sida si madax banaan loogu diyaariyo bacrimin geedka.
Sidee loo kaydiyaa qalabka?
Cuntada Cytokinin waa in lagu keydiyaa qaboojiyaha ama meel aan qorraxdu si toos ah u dhex gelin, iyo sidoo kale qalabka kuleylka. Nolosha sheyga - 3 sano.
Kala beddelashada daroogada
Marka lagu daro cytokinin paste, waxay si wanaagsan u saameynayaan orchid iyo daroogooyinka kale ee ku salaysan phytohormones. Kuwaas waxaa ka mid ah:
Keiki Grow Plus. Qalabkani wuxuu ka yimid Kanada. Waxay leedahay saameyn isku mid ah analogue-ka marka isticmaalka kowaad.
Itetto. Kani waa analogue farsameed oo cytokinins phytohormones. Waxaa lagu soo bandhigaa qaab budada ah, taas oo loo isticmaalo si loo helo xal loo baahan yahay in lagu buufiyo. Thanks to qalab this, size iyo midabka ubaxa sii kordhaya iyo hagaajin, iyo ay afkoda noqdaan qaro weyn.
Biyoatada Cytokinin waa qalab gaar ah oo loo isticmaalo floriculture. Iyada oo leh, toosi dhammaan burooyinkeeda of orchid, hagaajinaysaa muuqaalka ubaxa, dhoobo ubax iyo kordhisaa iska caabin ah cudurka. Laakiin si aad u hesho natiijo noocan oo kale ah waxaa kaliya oo lagu dabaqi karaa oo kaliya in la raaco dhammaan xeerarka ku-meel-gaadhka ah iyo daryeelka ee dhirta gudaha.
Waxaan soo bandhigi doonaa si aad u aragto ficil ku saabsan cytokinin paste: